ခရက်ဆီဒါ (ဂြိုဟ်ရံလ) - ဝီကီပီးဒီးယား
Voyager2image of the Uranian moons Portia, Cressida, and Ophelia
~20,000 km²[မှတ်စု ၁]
~260,000 km³[မှတ်စု ၁]
~0.013 m/s2[မှတ်စု ၁]
~0.034 km/s[မှတ်စု ၁]
ခရက်ဆီဒါ သည် ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ်၏ အတွင်းပိုင်း ဂြိုဟ်ရံလဖြစ်ပြီး ၁၉၈၆ ခုနှစ် ဗွိုင်ယေဂျာ ၂ ၏ ဓာတ်ပုံမှတဆင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ မူလက ယာယီအမည် S/1986 U3ဟု ပေးခဲ့သည်။ ဗွိုင်ယေဂျာ ၂ တွင်ပေါ်သော ခရက်ဆီဒါ၏ ပုံရိပ်မှာ ရှည်မျောမျောဖြစ်ပြီး ယင်း၏ ဝင်ရိုးသည် ယူရေးနပ်စ်ဘက်သို့ မျက်နှာမူလျက်ရှိသည်။ မျက်နှာပြင်မှာ မီးခိုးရောင်ဖြစ်ပြီး နောင်နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ မီလီယံကြာလျင် ဒစ်ဒီမိုနာနှင့် တိုက်မိနိုင်သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ Calculated on the basis of other parameters.
↑ ၃.၀ ၃.၁ Planetary Satellite Physical Parameters။ JPL (Solar System Dynamics) (24 October 2008)။ 12 December 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၅.၀ ၅.၁ Weighing Uranus' moon Cressida with the η ring (28 August 2017)။
↑ "Orbital Stability of the Uranian Satellite System" (1997). Icarus 125 (1): 1–12. doi:10.1006/icar.1996.5568. Bibcode: 1997Icar..125....1D.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ခရက်ဆီဒါ_(ဂြိုဟ်ရံလ)&oldid=716279" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၉:၁၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။